Nbudata Moya App maka gam akporo [ngwa ọhụrụ] - Luso Gamer
Nbudata Moya App maka gam akporo [ngwa ọhụrụ]
N'oge ugbu a, a na-eji usoro ntanetị eme ihe maka ebumnuche nkwukọrịta. Ọbụna ngwa dị ka WhatsApp ka a na-ejikarị eme ihe n'ụwa niile. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị ọrụ android ike gwụrụ iji ngwa dị otú ahụ n'ihi mgbochi. N'ịtụle nkụda mmụọ ebe a anyị na-ewetara Moya App.
N'ezie, nke a bụ ọhụrụ ulo oru nkwurịta okwu android. Ugbu a ijikọ faịlụ ngwa n'ime smartphone ga-ekwe ka ndị ọrụ gam akporo. Ime ọrụ nkwukọrịta dị iche iche n'ịntanetị n'efu na-enweghị ndenye aha ọ bụla.
Ọzọkwa, ndị mmepe na-eme atụmatụ ịgbakwunye nhọrọ sara mbara ọhụrụ. Ya mere, a na-ahapụ ndị ọrụ ka ha mee mgbanwe ndị dị mkpa na-elekwasị anya. Enweghị ike ịmegharị mgbanwe ndị ahụ dị mkpa n'ime ngwa ochie. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Ngwa ịkparịta ụka wee budata ya ebe a.
Kedu ihe bụ Moya Apk
Moya App Sassa bụ ngwa ekwentị sitere na nzikọrịta ozi android nke sitere na Datafree Africa Pty Ltd haziri. Ihe mere e ji nye usoro ikpo okwu ọzọ kachasị mma bụ iji weta ụzọ echedoro anya. Ebe ndị android ọrụ nwere ike na-eduzi nkwurịta okwu ọrụ n'ụzọ dị mfe.
Ọ bụ ezie na ahịa enweelarị ọgaranya na ngwa nzikọrịta ozi yiri nke ahụ. Nke na-trending na nnọọ ewu ewu n'etiti android ọrụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ n'ime ndị ọrụ android nwere ike ịnweta nnukwu nsogbu a mgbe ha kpebiri ime mgbanwe ụfọdụ.
Nke a pụtara na ndị ọrụ gam akporo nwere ike nweta nnukwu nsogbu n'ihe gbasara ịnweta dashboard ntọala. Ma mee mgbanwe ụfọdụ mgbe ị na-eji ngwa. Ọ bụ ezie na ndị ọkachamara na-ekwu na ha na-enye mmachi ndị a siri ike na-elekwasị anya nchebe onye ọrụ.
Mana ndị mmadụ kwenyere na mmachi ndị a nwere ike ịmanye ha ịchọ nyiwe ọzọ. Kedu nke dị nchebe yana obosara karịa ngwa ndị gara aga. Ọ bụrụ na ị na-achọ ikpo okwu yiri nke na-enye otu arụmọrụ wee wụnye Moya Messenger App.
Mmepụta Datafree Africa Pty Ltd.
Aha ngwugwu nu.bi.moya
Achọrọ gam akporo 5.0 na gbakwunyere
Category Apps - Communication
Mgbe anyị wụnye ma nyochaa faịlụ ngwa a na-enweta nke ọma. Mgbe ahụ, anyị chọtara ikpo okwu bara ụba na njirimara pro gụnyere nzuzo nzuzo dabere na ndị agha. Ọ bụ ezie na ngwa dị ka WhatsApp na-azọrọ na-enye ọrụ yiri nke ahụ na nchekwa nchekwa.
Mana ndị ọkachamara na-ekwu na data na akụkọ nzikọrịta ozi nke onye ọrụ bụ nke a na-apụghị imebi emebi. N'ihi ya, ndị ọrụ WhatsApp nwere ike iche na ọ nweghị nchebe mgbe ha na-eji ngwa n'ihi mmebi nchekwa. Ọbụna hackers nwere ike soro na nyochaa multiple oku mere site ọrụ.
Na mgbakwunye, ọnwa ole na ole gara aga WhatsApp na-ekwu na ọ kwenyere na nyiwe ndị ọzọ na-agbanwe data onye ọrụ. Nkwekọrịta a na-eme ka onye ọrụ ghara nchekwa yana obere nchekwa. N'ịtụle nsogbu ndị a niile na nchekwa onye ọrụ n'ihe gbasara ịkekọrịta data nwere mmetụta.
Ndị mmepe na-eme nke ọma n'iweta ngwa android ọzọ kacha mma. Ugbu a ijikọ ngwa nzikọrịta ozi android akwadoro ga-enyere ndị ọrụ android aka ịrụ ọrụ niile dị mkpa. Iji ikpo okwu n'efu na-enweghị ndenye aha ọ bụla.
Naanị ihe ha chọrọ ebe a bụ njikọ ịntanetị dị larịị na smartphone. Ọzọkwa, ndị otu edebanyere aha nwere ike ịkpọ oku na vidiyo dị iche iche. gbakwunyere zipu ma nata faịlụ mgbasa ozi na nzuzo na nzuzo. Iji jiri faịlụ ngwa biko tinye Moya App Download.
Enwere ohere ịnweta faịlụ Apk.
Maka ndebanye aha ekwentị achọrọ.
Enweghị ijide nọmba ekwentị ọ gaghị ekwe omume.
Ịwụnye ngwa na-enye ọrụ nkwukọrịta niile bụ isi.
Ndị ahụ gụnyere oku ọdịyo na vidiyo.
A na-agbanwekwa faịlụ mgbasa ozi dị iche iche.
Anaghị anabata mgbasa ozi.
dashboard ntọala omenala.
Edobere interface ngwa ahụ ka ọ dị mfe.
Nhọrọ oku ọdịyo na vidiyo dị.
A na-enwetakwa nhọrọ nkata nzuzo.
A ga-ewepụta nkọwa kọntaktị na-akpaghị aka.
Ọ ga-emepụta ndabere maka nchekwa.
Otu esi ebudata ngwa Moya
Enwere ike ịnweta ụdị ngwa ngwa sitere na Ụlọ Ahịa Play. Ma ọtụtụ ndị ọrụ android na-enwe nsogbu na ịnweta faịlụ Apk n'ihi nsogbu ndakọrịta. Ọbụna ndị ọrụ android hụrụ njehie ndị a dị iche iche mgbe ha na-enweta faịlụ Apk.
Yabụ na ọnọdụ dị otú ahụ mgbe ndị na-akwado ya enweghị ike ịnweta faịlụ Apk mbụ. Ga-aga na webụsaịtị anyị n'ihi na ebe a anyị na-enye naanị faịlụ ezigbo na nke izizi. Iji jide n'aka na nchekwa na nzuzo nke onye ọrụ, anyị etinyelarị ngwa na ngwaọrụ dị iche iche na-ahụ na ọ dị ire.
Faịlụ ngwa anyị na-akwado ma na-enye n'ime ngalaba nbudata. Bụ naanị mbụ na tupu ịnye ngwa n'ime ngalaba nbudata. Anyị etinyelarị ya na ngwaọrụ dị iche iche wee hụ na ọ zuru oke.
Enwere ọtụtụ faịlụ ngwa nzikọrịta ozi ka ebipụtara na webụsaịtị anyị. Iji wụnye na inyocha ngwa ndị ọzọ kacha mma biko pịa njikọ ndị enyere. Ndị ahụ bụ Yik Yak Apk na Salsa Live Apk.
Ọ bụrụ na ike gwụ gị iji faịlụ ngwa nzikọrịta ozi ọdịnala ndị ahụ. Na-achọ ihe ọhụrụ na pụrụ iche ebe android ọrụ nwere ike mfe gbanwee isi atụmatụ na-elekwasị anya chọrọ. Mgbe ahụ, anyị na-atụ aro ndị wụnye Moya App na-enwe free na ala nkwurịta okwu arụmọrụ.
Categories Communication, Apps Tags Ngwa ịkparịta ụka, Moya Apk, Ngwa Moya, Nbudata Moya App, Ngwa Moya Messenger Mail igodo
Nbudata Social Maker maka gam akporo [Pro Editor Free]
Nbudata Alkaicer TV maka gam akporo [IPTV's]